Doland Trump Oo Baajiyey Shir Nabadeed Dawladaha Adduunku Isha Ku Hayeen | Himilo Media Group
USA (Himilo) – Madaxweynaha Maraykanka, Donald Trump, ayaa dhankiisa ka badhi furay kulan madaxeedkii qorshaysnaa ee la filayey inuu bisha dambe la yeesho hoggaamiyaha Kuuriyada Woqooyi, Kim Jong-un.
Warqad uu u diray Kim ayuu Trump ku sheegay in aanay haboonayn inuu kulankaa la yeesho, waxaanu ku sababeeyey waxa uu ku tilmaamay cadhada xoogga leh iyo colaadda muuqata ee uu hoggaamiyaha Kuuriyada Woqooyi ku muujiyey hadalladii dhawaan ka soo baxay.
Waxa kale oo uu sheegay in ay suurto gal tahay in kulankoodaasi qabsoomin, laakiin waxa uu uga digay Pyongyan waxa uu ku sheegay falalka “doqoniimada” ah.
Go’aanka Trump waxa uu soo baxay saacado uun ka dib markii Kuuriyada Woqooyi sheegtay in ay dumisay xeradii ay ku tijaabin jirtay nukliyeerka, arrintaas oo loo arkay in ay ahayd farriin heshiis oo ay dhabbaha ugu xaadhaysay shir-madaxeedkaa haantan la baajiyey ee ka dhici lahaa Singapore.
Maamulka Trump waxa uu ku nuuxnuuxsanayey maalmihii la soo dhaafay in Kuuriyada Woqooyi aanay si waafiya ugu diyaar garoobayn shir madaxeedkaas taas oo qudheedu abuuraysay shaki ah in kulanku haddiiba uu dhaco ay waxa togani ka soo bixi doonaan.